တရုတ် Honda CIVIC ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စက်ရုံ | HankouBei
Mercedes Actros ဆွဲအား
Toyota Crown ဖြစ်သည်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မော်ဒယ် ရိုက်ပါ အမျိုးအစားခွဲ VIN တစ်နှစ် မိုင်တိုင် (KM) အင်ဂျင်အရွယ်အစား စွမ်းအား (kw) ကူးစက်ခြင်း
ဟွန်ဒါ CIVIC Sedan ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် LVHFC1656L6260715 ၇/၇/၂၀၂၀ 16000 1.5T CVT
လောင်စာဆီအမျိုးအစား အရောင် ထုတ်လွှတ်မှုစံ အတိုင်းအတာ အင်ဂျင်ပါဝါ တစ်အိမ် ထိုင်ခုံစွမ်းရည် စတီယာရင် စားသုံးမှုအမျိုးအစား နှင်
ဓာတ်ဆီ အဖြူရောင် တရုတ် VI ၄၆၅၈/၁၈၀၀/၁၄၁၆ L15B845 LHD ဖြစ်သည် Turbo Supercharger ရှေ့အင်ဂျင်
1. ထိပ်တန်း Notch Fuel Economy
Hondas သည်လောင်စာဆီအလွန်သက်သာသောကြောင့်လူသိများသည်။ ၂၀၂၀ Honda Civic သွားသလောက်၎င်းသည်၎င်း၏အတန်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ 1.5-L တာဘိုအင်ဂျင်နှင့် CVT တပ်ဆင်ထားသောကြောင့်မြို့တွင်း ၃၂ မိုင်နှုန်းနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမတွင် ၄၂ မိုင်နှုန်းအထိရနိုင်သည်။ စွဲမက်ဖွယ်ဂဏန်းများ၊ ဟုတ်တယ်မလား။ 2.0-L အင်ဂျင်သည်ပင်လျှင်မြို့တွင်း၌ 30 mpg နှင့်အဝေးပြေးလမ်းမတွင် 38 mpg ဖြင့် LX အနားကွပ်ပေါ်တွင်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဆီစားနှုန်းကိုရရှိစေနိုင်သည်။
The Civic သည်သက်တောင့်သက်သာနှင့်အားကစားကိုကောင်းမွန်စွာရောနှောပေးသည်။ ၎င်း၏စီးနင်းမှုသည်သာမန်ယာဉ်မောင်းအတွက်လုံလောက်သောအားကစားဆန်သည်ဟုခံစားရပြီး၎င်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။ ပါဝါချိန်ညှိနိုင်သောယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုသတ်မှတ်ပေးထားပြီးထိုင်ခုံများက၎င်းတို့ကိုများစွာအထောက်အပံ့ပေးသည်။ Civic ၌ခရီးရှည်သွားခြင်းသည်သင်ရှေ့တက်သည်ဖြစ်စေ၊ နောက်၌ဖြစ်စေထိုင်သည်မှာအတော်လေးအဆင်ပြေသည်။
3. Cabin အာကာသ
၂၀၂၀ Honda Civic သည်အသေးစား sedan ဖြစ်ရန်အသုံးဝင်ပြီးစမတ်ကျစွာပြုလုပ်ထားသောအတွင်းခန်းနေရာများစွာရှိသည်။ ကျောဘက်တွင်ခြေထောက်နေရာများစွာရှိသည်၊ sunroof သည်ရှေ့ထိုင်သူများအတွက် ဦး ခေါင်းနေရာကိုမတားဆီးပါ။ နောက်ခုံရှိခေါင်းခန်းသည်လုံလောက်သည်။ အရွယ်ရောက်သူအများစုသည်အခြား sedan ကားများတွင်သူတို့ဘယ်လိုခံစားရသည်နှင့်မှမတူဘဲအတူတကွခံစားရသည်။
Honda သည်၎င်း၏မော်တော်ယာဉ်များတွင်သိသိသာသာအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းအချို့ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအရာသည်ဇိမ်ခံဆီဒင်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်စျေးကြီးပစ္စည်းများမှပြုလုပ်သည်ဟုထင်ရသည်။ နူးညံ့သောထိတွေ့မျက်နှာပြင်များသည်တကယ့်ကိုပီတိဖြစ်ပြီးထိုင်ခုံများအတွင်းမှအခင်းသည်သင့်ကျော၊ တင်ပါးနှင့်ပေါင်တို့ကို၎င်းနှင့်လိုက်ဖက်သည်ဟုခံစားရသည်။ ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများသည်၎င်းတို့ကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်ထားပုံရသည်။ panel များအကြားကွာဟချက်မရှိ၊ ကားမောင်းနေစဉ်ခလုတ်သံမကြားရတော့ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် Civic အတွက်ခိုင်မာတဲ့တည်ဆောက်မှုတစ်ခုရှိတယ်။
၅. အစွမ်းထက် 1.5-L Turbocharged အင်ဂျင်ရွေးချယ်မှု
2.0-L အင်ဂျင်သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆင်ပြေသော်လည်း Turbo 1.5-L သည်နှစ်ခုထက်ပိုကောင်းသည်။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? 1.5-L သည်သိသိသာသာဆီစားသက်သာသည်ကိုသိသာထင်ရှားစေသည်၊ ဒါပေမယ့်၎င်းသည်အစွမ်းထက် punch တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ LX hatchback ၏ 1.5-L သည်မြင်းကောင်ရေ ၁၇၄ ကောင်အားနှင့်ရုန်းအား ၁၆၂ ပေါင်-ပေ၊ Sport hatchback သည်မြင်းကောင်ရေ ၁၈၀ နှင့် ၁၇၇ ပေါင်-ရုန်းအားကို 6-speed manual ဂီယာဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ CVT ဗားရှင်းသည်မြင်းကောင်ရေ ၁၈၀ အားနှင့်ရုန်းအား ၁၆၂ ပေါင်-ပေကိုရရှိလိမ့်မည်။ 2.0-L သည်မြင်းကောင်ရေ ၁၅၈ ကောင်အားနှင့်ရုန်းအား ၁၃၈ ပေါင်-ပေရှိပြီးပိုမိုနှေးကွေးသည်။ 1.5-L CVT ပါ ၀ င်နှုန်းသည်တစ်နာရီမိုင် ၆၀ နှုန်းကို ၆.၇ စက္ကန့်အတွင်းသာမောင်းနှင်နိုင်ပြီးဤအပိုင်းအတွက်လျင်မြန်သည်။
Honda Civic သည်အရှိန်ကောင်းသည်မှာသေချာသော်လည်း၎င်း၏ဘရိတ်များသည်အထင်ကြီးလောက်စရာဖြစ်သည်။ ဘရိတ်နင်းခြင်းသည်သင်၏ခြေထောက်အောက်ရှိသဘာဝကိုခံစားရပြီးသင်အသုံးပြုရမည့်ဖိအားပမာဏသည်အလွန်အကျွံမခံစားရပါ။ ယာဉ်သည်ရပ်တန့်နေစဉ်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းရပ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအကွာအဝေးတွင်ရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ဘရိတ်ကိုရိုက်ရင်တောင်မှသူတို့ဆီကလုံခြုံမှုကိုခံစားရလိမ့်မယ်။
၂၀၂၀ Honda Civic အတွက်စတီယာရင်နှင့်ကိုင်တွယ်မှုသည်ကြီးမားသောအချက်များဖြစ်သည်။ စတီယာရင်တွင်သူ့၌သဘာဝအလေးချိန်ရှိသည်၊ ၎င်းကိုမောင်းသည့်ပုံစံသည်အားစိုက်ရသည်မှာလွယ်ကူသည်။ variable-ratio system ကိုကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့် Civic သည်ထောင့်များကိုလှည့်ပတ်နေစဉ်၎င်းအားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရှိသည်။ ဘီးသည်အထူကြီးဖြစ်သော်လည်းမောင်းနှင်သူအားအလွန်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုပေးသည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည်အလှည့်အပြောင်းများအတိုင်းလှည့်ပတ်နေသည်နှင့်အညီဖွဲ့စည်းထားခြင်းကိုခံစားရသည်။ ပို၍ ကောင်းသည်မှာကောင်းစွာညှိထားသောဆိုင်းထိန်းသည်အားကစားကိုစီးနင်းစေသည်။ Civic သည် non-sport sedan တစ်ခုအတွက် spunk များစွာရှိသည်။
ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှုသည်လေယာဉ်ခန်းအတွင်းသို့လေ ၀ င်လေထွက်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ dual-zone အလိုအလျောက်ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင်ခန့်မှန်းရလွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုများရှိသည်။ မင်းသူတို့ကိုဆူလိုက်တာနဲ့မင်းလိုအပ်တဲ့အေးမြတဲ့နွေးထွေးတဲ့လေကိုရဖို့အမြန်ဆက်တင်ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီတွင်လေအေးပေးစက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးချမ်းအေးသောနေ့များတွင်လေယာဉ်ခန်းသည်လျင်မြန်စွာနွေးထွေးစေသည်။
၉။ ယာဉ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်ခြင်း
အိမ်ခေါင်မိုးတိုင်များသည်သေးသွယ်ပြီးကျယ်ပြန့်စွာခွဲခြားထားသဖြင့်ရှေ့နှင့်ဘေးပြတင်းပေါက်များမှယာဉ်မောင်းများကိုမြင်သာစေပါသည်။ အနောက်ဘက်မှမြင်နိုင်ရန်ကူညီပေးနိုင်သော standard rear-view ကင်မရာလည်းရှိသည်။ စောင်းနေသောခေါင်မိုးလိုင်းသည်မြင်ကွင်းအားအနည်းငယ်ထိပါးစေသော်လည်းကင်မရာကရှင်းလင်းပြတ်သားသောမြင်ကွင်းကိုရရန်လွယ်ကူစေသည်။
Cargo space သည် ၂၀၂၀ Honda Civic အတွက်ခိုင်မာသောအချက်ဖြစ်သည်။ Civic မှပေးအပ်သော ၁၅.၁ ကုဗပေရှိသောကုန်တင်အာကာသသည်၎င်းအား၎င်း၏အတန်းထဲတွင်အကျယ်ဆုံးစည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ထိုင်ခုံများကိုတွန်း ချ၍ ထိုင်ခုံများကိုခေါက်ရန်ဆွဲထုတ်ခြင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤကြီးမားသောဖွင့်ပွဲသည်သင်ရရှိနိုင်သောကုန်တင်အာကာသကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီသည်။
နောက်တစ်ခု: BYD ဟန်
Hankoubei အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း၊ Wuhan ပြည်နယ်၊ Hubei ပြည်နယ်